MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA ALOPEKIS IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Alopekis iyo Sawiro
Rita the Alopekis oo jirta 2.5 sano waxay ku nooshahay Thessaloniki, Greece.
Alopekis waa dawacooyin u eg, oo leh jaakad gaaban oo siman, madax qaab eg iyo dabo-dillaac, dhego dhagta leh iyo muujinta caqliga leh, jirka oo ka dheer dhererka eeyga ee qallalaya, xawaare leh oo dhaqdhaqaaqa leh. Mashiinka muuska la duubo ayaa si siman sanka loogu qabtaa iyada oo aan la tilmaamin ama hoos loo dhigin. Waxay leedahay joogsi fudud laakiin muuqata. Dusha sare ee qiiqku waa heer. Afku waa qoto dheer yahay oo ballaadhan yahay xididkiisa, oo leh daaman xoog leh. Qalfoofku waa mid ballaadhan, oo aad u yar yar, oo leh qol maskaxeed ku filan. Dhabannada ayaa la horumariyaa laakiin ma aha kuwo caan ah, fidsan oo qoto dheer. Lafta xuubku ma muuqato. Furitaanka hore ayaa laga arki karaa indhaha dhexdooda wuxuuna si habsami leh ugu baaba'aa koritaanka dhakada. Burooyinka ayaa sifiican loogu horumariyay hareeraha indhaha weyn. Daanka waa xoog badan yahay, oo leh xitaa iyo ilko joogto ah (maqas-qaniinyo). Bushimaha ayaa xiraya. Indhuhu waa ay ballaadhan yihiin, qaab yicib bay u wareegsan yihiin, dhalaalayaan, caqli badan yihiin, meel caadi ah oo aan qoto dheer lahayn ama soo bixinaynin, midab ahaan waafaqsan jaakadda iyo baalasha indhaha si fiican ugu habboon. Sanka waa mid ballaaran, oo leh sanka oo si fiican loo furay. Ma aha mid aad u ballaaran marka loo eego muuska, laastikada, qoyan, fidsan iyo heerka dushiisa hore, oo in yar ka soo baxa dibnaha kore. Dheguhu waa saddex xagal, waawayn yihiin, xoogaa wareegsan yihiin talooyinkoodana, waa kuwo kacsan oo aad u dhaqdhaqaaq badan. Qaanso-qoorta ayaa la arki karaa laakiin looma baahna. Dhererka qoorta waa mid dhexdhexaad ah, adag oo aan lahayn dharab, qaab cillad-isku-qaabeysan, oo si habsami leh ugu dhex qallalaya qallajinta. Jidhku wuu ka dheer yahay dhererka eeyga, oo leh feerad ballaadhan oo qoto dheer, feeraha si fiican loo dheereeyey oo aan lahayn feeraha qaabkiisu u eg yahay ama feeraha fidsan, oo leh gug iyo hogag wanaagsan. Dhabarka ayaa xoog leh oo qalooca xoogaa muruqyada ah, sinta ballaaran iyo qallaf. Saldhigga hore si wanaagsan ayaa loo jiifiyay iyadoo garbaha garbaha laga samaynayo xaglo wanaagsan oo leh gacmaha kore, kuwaas oo dhererkoodu la mid yahay. Faraha hore waa toosan yihiin, laf wanaagsan laakiin aan culusayn, curcuro xoog leh iyo balastarro laastik ah, kuwaas oo waxoogaa u janjeedha dhinaca toosan iyaga oo aan wax badan iska dhicin. Cagaha waa elliptical, ma aha wareeg sida bisadaha qaabeeya inta udhaxeysa wareega iyo oval, leh ciddiyo gaaban, xoog leh iyo laastikada, suufka qaro weyn. Xaga dambe ee dambe waa mid si fiican u wareegsan, dherer wanaagsan iyo xagal miskaha, bowdyo aad u ballaaran, ballaaran oo muruqyo ah, oo sameysanaya xaglo wanaagsan oo leh stifles si fiican u horumarsan, jilbaha adag iyo hockyada, toosan, toosan oo si fiican u siman metatarsal kasta, oo aan leexan gudaha iyo dibaddaba. Dabada way dheertahay, waxay samaysanaysaa manjo, gaadhaysa kala goysyada xarkaha, oo la dhigay oo la qaaday waxoogaa sare, oo leh qalooc xarrago leh, oo aan dhabarka ugu dhicin dhabarkana aan si toos ah u qaadin. Dhaqdhaqaaqa oo ku faraxsan dhaqdhaqaaqa, oo leh jaakad ka sameysan buraash hoosta. Dharka laba-geesoodka ah waa tayo wanaagsan, oo leh jaakad dusha sare oo adag, jilicsan oo cufan jaakad. Jaakadu way ka sii dhumuc weyntahay uguna dheer tahay qoorta, sameynta burush dabada hoosteeda, jebinta xaga dambe ee bowdyaha iyo baalal gaagaaban oo sagxadaha dambe ee lugta hore. Dhex-dhexaad dherer ah, oo aan ka badnayn 2 inji (5 cm), oo si siman u jiifa jidhka ama kaliya aad u yar oo ruxruxaya, oo leh cirfiid dabiici ah oo dabiici ah. Wuxuu ku yimaadaa dhammaan midabada iyo isku darka marka laga reebo midabka midabbada leh (albino). Midab adag ayaa doorbiday laakiin 'sanka jiilaalka' waa inaan la ciqaabin. Labada indhood waa inay noqdaan isku midab, mid buluug ah ama mid hufan (biyo leh). Indhaha khafiifka ah ee huruudda ah (sida shimbir ugaadha ugaadha ah) ayaa ah cillad qurxin oo daran Laba nooc oo jaakad ah ayaa dhaca, kuwa gaagaaban iyo kuwo silig leh. Nooca siligga leh waa mid aad u yar, laakiin shaqo ahaan sidoo kale waa la horumarin karaa. Noocani sidoo kale wuu ka yar yahay kana fudud yahay kan Eyga Giriigga Yar .
Adeeg yar oo ujeedooyin badan leh iyo eeyga guriga ee nolosha magaalooyinka iyo magaalada. Saaxiib aamin ah oo daacad ah Caajis la'aan iyo caawiye caawiye, dabeecad wacan iyo sirdoon sare, shaqaale si fudud loo tababaray. Xoog, caafimaad, adag oo baahi dhexdhexaad ah. Eey-ilaaliye, jiir, adhi-u-adeege, oo leh dareen ugaarsi dabiici ah. Ciyaar badan, bulsheed aadna u xariif badan. U hamuun qaba inuu ka farxiyo milkiilihiisa, cibaado aamin ah. Alopecis waa wehel guriga ah, feejignaan leh laakiin isku kalsoon isla markaana rajo wanaagsan leh. Adeecsan, nool, feejignaan leh, feejignaan leh, dibadda u baxa oo ku faraxsan dabeecad ahaan. Saaxiibtinimo iyo xitaa xanaaq badan. Difaaca dadka iyo xayawaanka guryaha, cadowga aan naxariis lahayn ee sunta. Shaqeeye xamaasad leh, si aad ah u tababaran, aad u dhaqdhaqaaq badan, oo leh dareen ugaarsi iyo dabeecad ciyaar. Alopecis waa wehelka la qiimeeyo ee dadka Griigga laga soo bilaabo waqtigi hore ilaa maanta. Geesinimo buuxda oo had iyo jeer indho furan, marwalba-diyaar u ah ficil. Daal la'aan oo awood u leh inuu daboolo masaafooyin waaweyn, isboorti iyo falcelin deg deg ah. Fikir wanaagsan oo hufan, lehna adkeyn iyo adkeysi. La qabsan karo oo u hamuun qaba baahida sayidkiisa. Fadliga akhlaaqda oo ku fiican caadooyinkeeda. Tani waa nooc eey ah oo aan la faafin, waxtarna u leh howlo badan oo lagu maneystay adkeysi qarniyo jir ah iyo xikmad canine ah. Run 'multum in parvo,' * oo si isku mid ah looga dareemo guriga deegaan kasta, magaalo ama reer miyi. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar (bini'aadanku wuu kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka) . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
* Griig ahaan weedha waa: 'polla en smikro,' oo macnaheedu yahay waxyaabo badan oo ku jira xirmo yar.
Dhererka: 8 - 12 inji (20 - 30 cm) (oo leh dulqaad ilaa 2 cm ka sarreeya xadka shaqsiyaadka nooca fiican ah)
Miisaanka: 6.5 - 15.5 rodol (3 - 7 kg)
MAYA dhibaatooyinka hidde-wadaha guud ee la yaqaan.
beagle feeryahanka qas weynaado
Alopekis wuxuu ku habboon yahay nolosha magaalooyinka ama waddanka, dabaq yar ama beer. Waa eey aad ula qabsan kara.
Alopekis waa in loo qaataa socod dheer maalinle ah . Waxay u baahan yihiin ciyaar bilaash ah, laakiin waxay la jaan qaadi karaan qoys yar haddii ay socod lug ah yeeshaan. Eeyo yar yar oo isboorti ah, oo ku habboon firfircoonida yar!
Haddii si fiican loo daryeelo, waxay si fiican u gaari karaan 14-16 sano.
i tus sawirrada jiirrada jiirka
Si fudud loo qurxiyo loona daryeelo.
Awoowayaasha kooxdan ayaa ah eeyo hore oo ka soo muuqday Giriigga xilligii proto-Hellenic ee dadka Pelasgoi. Natiijooyinku waxay jiraan illaa iyo inta laga gaaro degsiimooyinka da'da Paleolithic ee Thessaly. Waxaa ku tilmaami jiray Giriiggii hore 'alopecis' (yar yar iyo dawaco u eg). Eeyo la mid ah ayaa lagu sawiray sawirada Giriiggii hore iyo sidoo kale waxyaabo kale oo qadiimi ah. Alopekis wuxuu si dabiici ah ugu dhacaa guud ahaan waddooyinka Giriigga ee marin habaabinta ah, in kasta oo hadda si taxaddar leh loo dhaqmayo. Hal mar Alopekis iyo Eyga Giriigga Yar waxaa loo tixgeliyey inay yihiin noocyo kala duwan oo isku nooc ah. Tani tan iyo markii ay isbedeshay heerarka ku meelgaarka ah ayaa loo qoray nooc kasta tan iyo markii labadaba ay run yihiin nooca. Marka la eego tirooyinka, tarankaani wuu ka yaryahay kan yar ee yar ee Griiga Gariiga ah, in kastoo labada noocba ay noqon doonaan noocyada ugu fudud uguna macquulsan ee laga dhoofiyo Griiga lana dhiso meelo kale.
Giriiggii hore noocyo aan timo lahayn ayaa jiray, oo mararka qaar si khaldan loogu yeeri jiray Eyga Qaawan ee Turkiga. Nasiib darro noocan ayaa noqday bakhtiyey . Sababta uu u bakhtiyay waa laba arrimood. Midka koowaad ayaa ah in cimilada Giriiggii hore ay ka diirran tahay cimilada hadda jirta. Tani waxay u oggolaatay noocyada aan timaha lahayn inay noolaadaan, laakiin maadaama jawigu bilaabay inuu qaboojiyo Alopekis bilaa timaha ah wuxuu u baahday faragelin banii’aadam si uu u noolaado. Tani ma dhicin sababtoo ah xaqiiqda ah in dad badan oo Griig hore ah ay u arkeen nuucaan inuu yahay mid fool xun.
chiuaua iyo yorkie eeyo isku dhafan
Naadiga Hellenic ee ku habboon ayaa hada qaabeysan.
Rita the Alopekis 2 bilood, 4 bilood iyo 1 sano jir
Eydan Saaxiibtinimada Giriigga ee Qadiimiga ah Weli Guryahooda ayey ku sugan yihiin
Waad ku mahadsan tahay Maria Winsor-Ginala oo ku siisay Macluumaadka Noocyada Eeyaha.
Sidoo kale waad ku mahadsan tahay Cory Leed bixinta macluumaadka Dog Breed Information qaar ka mid ah macluumaadkan. Iyo mahad gaar ah Phil Taormina oo ka caawiyay Cory macluumaadka.
shih tzu iyo jack russell